Ubaxii Deyrta - Qaybta 1aad - Boga Wise Man
September 9, 2019 qawdhan
Xagaagan London cadceedu kuma yara.
Labo cisho ka hor ayuu Saleebaan uu usoo guuray qol iyo bersad uu ka kiraystay dabaq cusub oo loogu talo galay dadka shaqaalaha mushaharka fiicana oo ku yaal xaafada Harrow ee magaalada London.
Labadii maalmood waxa uu ku mashquulsanaa sidii uu alaabta guriga si fiican ugu dhigan lahaa. Maadaama ay shaqooyinkiisa badan ka mid tahay inuu yahay qoraa, afaf badan wax ku qora, alaabta uu lasoo guuray waxa ugu badnaa buugaag.
Wakhtiga intiisa badan waxa uu ku lumiyey sidii uu qolka bersada shelefka buugaagta ugu hagaajin lahaa, koombiyuutarka u xidhi lahaa, sabuurada gidaarka u sudhi lahaa.
Ugu dambeyn wuu ka nastay. Si fiicana wuu u dhameeyey oo gurigii siduu rabay ayuu u ekeysiiyey.
Wuu dhoola cadeeyey, waxaanu samaystay koob shaah ah.
Saleebaan sababta gurigan cusub keentay ayaa maskaxdiisa kusoo dhacday. Madaxa ayuu lulay isagoo keligii isla hadlaya iskuna bogaadinaya inuu helay guriguu rabay.
Wuxuu rabay guri cidlo ah iyo xaafad ay dad dhalinyaro ahi ku nool yihiin, gaar ahaan arday. Maadaama qorshe weyn oo qoraal, fikir, baadhis iyo alifaad isugu jira uu bilaabayo wuxuu soo doontay xaafad degan.
Saleebaan da’diidu waa sagaal iyo soddon jir, hadaad aragto se waxaad ku qiyaasaysaa 33 jir. Waa nin gobol ah, jidh ahaan dhisan, inyar oo cirro ah leh, bidaarse aan lahayn. Midabkiisu waa maariin, wejigiisuna waa mid dadka iskaga dhex jira oon xasuus badan kugu reebayn.
Qorshaha Saleebaan ugu soo guuray gurigan cusub waa mid uu ku qiyaasay inuu qaadanayo muddo hal sano ah.
Waxa muddadaa sanadka ah u qoondaysnaa Saleebaan inaanu qorshaha iyo qoraalka uu ku jiro mooyee wax kale habayaraatee, haba badnaatee wakhti ku lumin.
Sida uu ugu talo galay, waxa uu hawlgalkiisu bilaabmayaa shanta aroonimo, 1-da June.
Shaahii ayuu la tegay miiskii fadhiga yaalay, waxaanu mobile-ka ka furay app uu ku qortay shaqada maalin-laha ah ee uu qoondaystay.
Kicis salaada subax. Tukasho.
Quraac fudud + Shaah.
Orod 45 daqiiqo ilaa 1 saac.
2 saacadood diyaar garaw iyo guri hagaajin ah iyo cunto samayn.
8 am illaa 12 PM wax qoris. 10 daqiiqo oo nasasho ah saacad kasta ku jira.
12 pm illaa 2 PM qado iyo salad, wararka oo internet-ka ka eego iyo ka jawaabiista wixii emailo iyo fariimo kale ah.
2pm illaa 5 PM baadhis iyo qoraal isku jira.
5.30 PM salad, kadibna jimicsi iyo tegida gym-ka.
7.30 PM guriga kusoo laabo, maydho, bedelo, wax cun, tuko.
8.15 PM dibada u bax oo 30 daqiiqo soo yara lugee oo madaxa soo nasi, soo noqo tuko.
10.15 PM seexo.
Saleebaan waxa ugu dambeysay nidaam noocan oo kale ah oo uu raaco toban sano kahor. Waxa uu is weydiiyey in muddo sanad ah uu ka bixi karo nidaam sidaa u adag. Kadibna waxa uu is xasuusiyey in hadaanu sidaa isugu adkeyn in qorshuhu ku qaadan doono ugu yaraan shan sano.
Todoba maalmood ayaa uga hadhsan wakhtiga hawshu u bilaabmayso Saleebaan. Waxa uu diyaarsaday shandadii uu gym-ka ku tegi lahaa. Hore ayuu gym-ka uu rabo usii sahansaday.
Saleebaan fooqa waxa uu ka degan yahay dabaqa todobaad.
Lift-ga ayuu soo galay, waxaana markuu dabaqa koobaad marayo soo fuulay gabadh telefan ku hadlaysa, weliba af Soomaali ku hadlaysa.
Maadaama aanu barnaamijkiisii u bilaabmin isha ayuu ku hubsaday.
Inkasta oo quruxdeedu ka yaabisay hadana isha kumuu sii hayn, kamanay dareemin inuu eegay. Waxay ahayd gabadh dheer, dhuuban, balse laf weyn. Waxa uu umaleeyey inay kubada koleyga ciyaarto jidhkeedu siduu u dhisnaa. Waxa intaa u raacay sandheer iyo indho waaweyn.
Eman ma ay arag ninka kaga il horeeyey. Waxa telefanka ugu jiray hooyadeed oo ku canaananaysay inay tigidhkeedii fasaxa ay Sweden ku tegi lahayd iibsatay iyo inkale. Eman waa 19 jir, ka timid Sweden oo jaamacad ayay ka dhigataa London.
Inkastoo ay maadada ay doonto dooran karaysay, waxa ay dooratay maadadii ay ilaa yaraanteedii xiisay jirtay.
Eman: Haye hooyo wallaahi caawa ayaan iibsanayaa.
Eman: Haye hooyo okay bye.
Markay telefankii dhigtay ayay jaleecday ninka agteeda taagan. Waaba nin Soomaali ah.
Saleebaan ma uu eegin xageeda, inkastoo uu la socday inay si farsamaysan usoo jaleecday. Waxa uu markiiba gartay inay ardayad tahay.
Eman waxa hore isugu qaban waayay sida uu dhisan yahay iyo inuu Soomaali yahay. Waayo nin dhisan oo Soomaali ah inanyar mooyee badanka ma ay arkin.
Markii lift-gu istaagay ayuu u tilmaamay inay ka hor baxdo. Dhoola cadeyn bilaa ilko ah intay tustay ayay ayay ku tidhi “thanks”
Eman Jacayl London Saleebaan
Previous Post Siyaasada Horumar-ka Somaliland
Next Post Ubaxii Deyrta – Qaybta 2aad
Xusuus Qorkii Maxamed S Gees - Sanadihii Cadhada 74